လုပ်သလိုသာဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးကို ကျဉ်းကျဉ်းလေးဖြစ်အောင် လုပ်ထားလိုက်ချင်တယ်။ တကယ်ပါ...
တရုတ်ပြည်ကနေ မြန်မာပြည်ကို အဖူးမြော်ခံရောက်ရှိခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ရဲ့ မူရင်းပုံတော်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သွားဖူးတုန်းကတော့ အဝေးကနေဖူးရတာဆိုတော့ မြင်ကွင်းက အကန့်အသတ်နဲ့ဆိုတော့
အခုပုံတော်ကို ရတာနဲ့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အားရပါးရ ဖူးမြော်ကြပါခင်ဗျာ။
Arts of Yangon Thar at 7:17 PM9Hits!!
ဖတ်ကြည့်ပါဦးနော် . . . .
ကိုယ်ပြောချင်တာနဲ့ တိုက်ဆိုင်တာနဲ့ ကူးပြီးတင်လိုက်တာပါ...
(တိုက်ဆိုင်တာကလဲ များနေပြီနော်... ကူးပဲကူးနေတာပဲ)
Arts of Yangon Thar at 3:33 PM4Hits!!
အောင်မြင်ခြင်းသည် လူအချင်းချင်း ပြေပြစ်စွာ ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းပေါ်တွင် အခြေတည်ပါသည်။ အောင်မြင်လိုသူများသည် စကားအင်္ဂါ အချက် (၁၀) ချက် ကို သေသေချာချာလေ့လာပြီး မိမိကိုယ်ကို လေးကျင့် ပေးသင့်ကြရပါမည်. . . .
Arts of Yangon Thar at 3:30 PM 1 Hits!!
ဖတ်စေချင်လွန်းလို့ . . . .
6. သေကိန်းဆိုက်တဲ့ညနှင့်အခြားဝတ္တုတိုများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/aungthintay_kein_site_tae.pdf> အောင်သင်း
7. ဥာဏ်ပညာ ထက်မြက်သူတို.လက်စွဲ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/art-of-war.pdf>ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ)
8. အနှစ်၃၀<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/chit-naing-30-years.pdf>ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ)
9. သိပ္ပံမှသည် သစ္စာဆီသို.<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/chit-nge-thatepanmha.pdf>(ချစ်ငယ်)
15. ညမဖတ်ရ (သို.မဟုတ်) သွေးစုပ်ရောဂါ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00015.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
17. ထမင်းလုံး တစ္ဆေ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001602.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
19. ၀ိညာဉ်၏ အရိပ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001604.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
20. သင်္ဘောပျက် ခရီးသည် ခုနှစ်ယောက်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001605.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
23. ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်သူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00017.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
24. ငယ်ကချစ် အနှစ်တစ်ရာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00018.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
25. ရှက်ပြုံး <http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00023.pdf>(ချစ်စံဝင်း)
29. တော <http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00027.pdf>(လင်းဝေမြိုင်)
31. စာဖတ်ကျွမ်းခြင်းဖြင့် ဘ၀တိုးတက်ရေး ၁<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00029.pdf>(ဇင်သန်.)
32. စာဖတ်ကျွမ်းခြင်းဖြင့် ဘ၀တိုးတက်ရေး ၂<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00030.pdf>(ဇင်သန်.)
33. စာဖတ်ကျွမ်းခြင်းဖြင့် ဘ၀တိုးတက်ရေး ၃<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00031.pdf>(ဇင်သန်.)
34. ဆင်းရဲသောဖေဖေ ချမ်းသာသောဖေဖေ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00033.pdf>(ညီသစ်)
36. ကလေးပြဿနာ <http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00035.pdf>(ပါရဂူ)
37. သူ.လိုဘုရင် <http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00036.pdf>(ပါရဂူ)
42. ညီမလေးရယ်စိုးရိမ်မိတယ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00042.pdf>(တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်)
43. တန်းခူးလေနှင့်လျော့တော့သည်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00043.pdf>(တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်)
44. ၀သန်လေချိန်မှန်ကူး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00044.pdf>(တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်)
46. အေးချမ်းစေသော စကားလုံးလေးများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00046.pdf>(ဖိုးဝမောင်)
47. ဖြစ်တည်ခြင်း ပဓါန၀ါဒနှင့် လူသားပဓါန၀ါဒ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/san-lwin-humanism.pdf>
49. အချစ် လက္ခဏာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/san-zar-ne-bo-love-signs.pdf>(စံ-ဇာဏီဘို)
50. အချစ် ဗေဒင်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/san-zar-ne-bo-love-talk.pdf>(စံ-ဇာဏီဘို)
52. နံနက် ၃နာရီ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/saungwinlatmorning3hour.pdf>(ဆောင်းဝင်းလတ်)
53. ဆူးကလေးစူးတယ် ခူးမယ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/saungwinlatsulay-sutal-kumal.pdf>
54. အမှတ်တရရွှေ ၆၀<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/240-win-nyine-2.pdf>(၀င်းငြိမ်း)
65. အရှေ.မြို.ရိုးမှ မိုးရေစက်များ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/a-shay-myo-yoe-taryar-min-wai.pdf>
69. ကိုယ့်လက်နဲ. ဖမ်းမိတဲ့နဂါးငွေ.တန်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryar-minway-milkyway.pdf>
70. ကိုးမရှိတဲ့ န၀င်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryar-minway-none9na-win.pdf>
71. အထဲသို.၀င်လော့ ဘာကြောင့်ရပ်နေသနည်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarthinnaenannatkin.pdf>
76. လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ကျောက်ထွင်းရာဇ၀င်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarminwaylu-nge.pdf>
82. မျိုးရိုးထဲမှ ဆိုးပေကြီးများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thu-maung-black-sheeps-from-relatives.pdf>
84. သုခ မှတ်စု<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/39-thukhathu_kha_matsu.pdf>
86. ရွှေဘုံသာ လမ်းပေါ်မှာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/laytuyaeshwe_bone_tar_lan.pdf>(ဦးလှဝင်း)
88. တာတေ စနေသား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/u-nu-tartay-sanay-thar.pdf>(ဦးနု)
90. ၁၉၈၈-၂၀၀၂ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ထူးခြားမှုရက်စွဲမှတ်တမ်းများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/87-and-2002.pdf>
91. HIV မှတ်စုများ ၂၀၀၄<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/dr-thiha-hiv-hmatsumyar.pdf>(ဒေါက်တာသီဟ)
94. ယောနသံ ဇင်ယော်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/jonathan-livingstone-seagull.pdf>(ဦးဘသန်း)
95. မှတ်မိသမျှ ကိုအောင်ဆန်း၏ကျောင်းသားဘ၀<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ko-aung-san-thakhin-kyaw-sein.pdf>
98. သွေး <http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mamalayblood.pdf>(ဂျာနယ်ကျော် မမလေး)
100. ရှေးဘ၀ နောက်ဘ၀ ဗုဒ္ဓ မဝေဖန် နှင့် ဓမ္မစာစုများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/win-thein-oo-future-life-and-past-life.pdf>(၀င်းသိန်းဦး)
101. ငှက်တွေ ဆောင်းမခိုမီ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/winter.pdf>(ငြိမ်းအေးအိမ်)
102. မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၁) အပိုင်း က<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/swe-sone-kyann-1-pine-ka.pdf>(ဦးနု)
103. မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၁) အပိုင်း ခ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/swe-son-kyann-1a.pdf>(ဦးနု)
104. အဟိတ်- - - ၀တ္တုဇာတ်လမ်းများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/theik-pen-mg-wa.pdf>(သိပ္ပံမောင်ဝ)
105. ရတနာ လိုဏ်ဂူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/natnweya-ta-nar_lhaunggu.pdf>(နတ်နွယ်)
107. ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ. ရင်ခုံသံ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/win-win-myint-pantapwintyae-27yinkhonethan.pdf>(၀င်းဝင်းမြင့်)
109. ဝေေ၀ရီရီ ၀တ္တု<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/zaw-zaw-aung-way-way-yeye.pdf>(ဇော်ဇော်အောင်)
116. ၀တ္တုတိုများ ၆<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/masandarmagzinenovel_6.pdf>(မစန္ဒာ)
120. ကိုဒေါင်း (မောင်ထင်)<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg_htin_s-ko_dang.pdf>
123. ဟာသများလက်ရွေးစင် ၂<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-kaung-htike-02.pdf>(မောင်ကောင်းထိုက်)
124. ဟာသများလက်ရွေးစင် ၁၄<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-kaung-htike-14.pdf>(မောင်ကောင်းထိုက်)
126. ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းခေတ် အိုင်ဒီယာစီးပွားရေး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-susan-global.pdf>(မောင်စူးစမ်း)
127. ထူးအတွေ.ကြုံအဆန်း တစ္ဆေဇာတ်လမ်းများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/dr-aung-kyaw-htoo_atwe_akyone_san.pdf>(ဒေါက်တာအောင်ကျော်)
128. တွေ.ရကြုံရ ရှတတလေးတွေ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/eikyarkwe-tweyakyoneyashatatlaytwe1.pdf>(အီကြာကွေး)
133. ဆားလင်းနှင်းမောင်နှင့် ဘမျိုးဘိုးတူ ဘယ်သန်ဘမှန် ပထမပိုင်း<http://shweone.wordpress.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=6http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mintheinkhabamyo-boe-thu.pdf>(မင်းသိင်္ခ)
134. ဆားလင်းနှင်းမောင်နှင့် ဘမျိုးဘိုးတူ ဘယ်သန်ဘမှန် ဇာတ်သိမ်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mintheinkhabae-than-ba-mhan2.pdf>(မင်းသိင်္ခ)
135. မ" တတ်ပါ့"<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mintheinkhama_tat_pa.pdf>(မင်းသိင်္ခ)
138. ဖရန်.(ဇ)ကာ(ဖ)ကာ၏ စာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/myint-than-word.pdf>(မြင့်သန်း)
139. ပြောရင်းပြောနေမည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nanda-theinzan-pyawchinthamya.pdf>(နန္ဒာသိန်းဇံ)
140. အိုင်ဒီယာ အက်ဆေးများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/21-naywinmyintidea_essaymyar.pdf>(နေ၀င်းမြင့်)
149. ဇွတ် <http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-zut.pdf>(နီကိုရဲ)
155. တစ်မျိုးညာနွဲ. သွေမဖယ် စိုးပါနဲ.မေရယ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nwan-gyar01.pdf>(နွမ်ဂျာသိုင်း)
156. ပန်းပွင့် ခရေနှင့်အခြားဝတ္တျုတိုများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/kha-yay.pdf>(မစန္ဒာ)
157. အောက်စ်ဖို.ဒ် တက္ကသိုလ် ခရီးသွားမှတ်တမ်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/mg-va.pdf>(သိပ္ပံမောင်ဝ)
158. မြတ်ဗုဒ္ဓ ဒေသနာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/what-buddha-taught-in-myanmar.pdf>
162. ချစ်သူ၏သမီး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/chit_thu_ei-20_thamee.pdf> (ဂျူး)
163. ရေမျောသီး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/ju_floating_fruit.pdf> (ဂျူး)
164. လေထဲမှာပျံဝဲသူများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/ju_flying_humans_in_space.pdf> (ဂျူး)
165. ကမ္ဘာမြေရဲ့ချစ်သူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/ju_nature_lover.pdf> (ဂျူး)
166. အမုန်းကြောင့်ဖြစ်သောစစ်ပွဲများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/jueamonekyaunephitthaw.pdf> (ဂျူး)
167. ကြယ်စင်တံတားကမ်းပါးနှင်းဖြူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juekyalsintatar.pdf> (ဂျူး)
168. ရာဇ၀င်ထဲမှာမောင့်ကိုထားရစ်ခဲ့<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-leave-me-alone-in-history.pdf> (ဂျူး)
169. လရောင်ကိုကြောက်သူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-afraid-of-moonlight.pdf> (ဂျူး)
170. ချစ်ခြင်း၏အနုပညာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-art-of-love.pdf> (ဂျူး)
171. မိန်းမနှစ်ယောက်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-main-ma-nha-yout.pdf> (ဂျူး)
172. မြရဲ့လ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-mya-yae-la.pdf> (ဂျူး)
173. အက်ဆစ်တစ်ခွက်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-poison.pdf> (ဂျူး)
174. ချစ်သူလားစကားတစ်ပွင့်ပွင့်ခဲ့တယ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-sagar-pwint-2.pdf> (ဂျူး)
175. ကျွန်မနဲ့ဆေးလိပ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-smoking-and-me.pdf> (ဂျူး)
176. ဆရာဝန်နှစ်ယောက်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-two-doctors.pdf> (ဂျူး)
177. ကြယ်ကြွေတို့ရဲ့အတောင်ပံ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-wingoffallingstar.pdf> (ဂျူး)
178. ကမ္ဘာမြေရဲ့ချစ်သူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-world_s-lover.pdf> (ဂျူး)
181. အဖြူ <http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/white.pdf>(ဂျာနယ်ကျော် မမလေး)
183. ရှူး <http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/shuu.pdf>(တာရာမင်းဝေ)
193. ခေတ်သစ်တစ်ခု၏အစ၊ အဓိပ္ပါယ်များ၏အဆုံး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/adeitpai.pdf>(မင်းခိုက်စိုးစန်)
196. သုည <http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/tokenya.pdf>(မင်းခိုက်စိုးစန်)
209. အစီရ၀တီ ကုဏ္ဍလကေသာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/chitoonyoasi-ya-wady.pdf>(ချစ်ဦးညို)
216. ဘီလူး <http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/361.pdf>(အကြည်တော်)
217. ဇ <http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/364.pdf>(အကြည်တော်)
220. တောသားကြီး <http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/370.pdf>(အကြည်တော်)
222. သဲလှည်း <http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/373.pdf>(အကြည်တော်)
225. မှ တစ်ဆင့် <http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/426.pdf>(မိုးမိုးအင်းလျား)
227. ပျောက်သောလမ်းမှာ စမ်းတ၀ါး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/430.pdf>(မိုးမိုးအင်းလျား)
228. စိန်တစ်ပွင့် <http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/431.pdf>(မိုးမိုးအင်းလျား)
229. သိက္ခာရှိတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/434.pdf>(မိုးမိုးအင်းလျား)
230. ဝေဒနာ ကြာနီပွင့်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/435.pdf>(မိုးမိုးအင်းလျား)
237. ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ လွတ်လပ်ရေးစိတ်ဓာတ်မျိုးစေ့ချခဲ့သူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/uotm.pdf>
စာအုပ် များကို အပင်ပန်းခံစွာ မြန်မာများအားလုံး မျှဝေခံစားနိုင်ရန် အတွက်
ပေးပို့သူများအားလုံး ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ရွှေစကား မှလည်း
အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားပါမည်။ စာအုပ်များရှိပါက မျှဝေခံစားနိုင်ရန်
myanmarchatadmin@gmail.com သို.ပေးပို့ ကူညီကြပါရန်။
ဟိုလူတွေ ကော်ပီဆို ဒီလူတွေ ကော်ပီဆို
ဟိုလူတွေ ကော်ပီရေး ဒီလူတွေ ကော်ပီရေး
ဒါကြောင့် ရန်ကုန်သားလည်း ကော်ပီရေး . . . . .
Arts of Yangon Thar at 2:48 PM0Hits!!
ဘယ်အရာမဆို ဟုတ်တယ်၊ မှန်တယ် ဆိုတိုင်း မပြောရဘူးတဲ့။ မှန်တယ်ဆိုပေမယ့် သူတပါး အကျိုးကို ပျက်စီးစေခြင်း၊ ဆုတ်ယုတ်စေခြင်း ဖြစ်နေရင် မပြောရဘူးတဲ့။ သူတပါးက လက်မခံတဲ့ အမှန်တရားကိုလည်း သူတပါးက လက်မခံရင် မပြောရဘူးတဲ့။ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားစကားပါ။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာ သံသရာကလွတ်မြောက်ရာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရား အစစ်အမှန်တွေပါ။ ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရားတွေကို မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တောင် မဟောတဲ့သူ (၅)မျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒီသူတွေကတော့...
၁။ တိဋ္ဌိ ဂိုဏ်းသားများ
၂။ တိဋ္ဌိဂိုဏ်းသား ဆရာကြီးများကို ကိုးကွယ်ကြသူများ
၃။ ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါ အတ္တ ဇီဝ အယူစွဲနေသူများ
၄။ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ လက္ခဏာရေးသုံးပါး ရှောင်ကြဉ်သူများ
၅။ လက္ခဏာရေးသုံးပါး သဘာဝ သာမက၊ သစ္စာလေးပါးကို သိမြင်အောင် ဟောပြနိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို ရှောင်ကြဉ်သူများ
သူတို့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်တွေဟာ အမှန်ကန်ဆုံးတွေ ဖြစ်နေပေမယ့်၊ မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်က ဟောသင့်မှဟောတာပါ။ ပရိတ်သတ်နဲ့ နေရာဒေသ အချိန်အခါကို ကြည့်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ အမှန်တရားဆိုတာလည်း အကန့်အသတ်နဲ့ တည်ရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်။ မှန်တယ်ဆိုပြီး ဇွတ်လုပ်လို့မရပါဘူး။ အချိန်အခါ နေရာဒေသပေါ်မူတည်ပြီး အမှန်တရားက ကွယ်ပျောက်ကောင်း ကွယ်ပျောက်နေပါမယ်။
ထို့ကြောင့် . . . ထို့ကြောင့် . . . အမှန်တရားဆိုတာ . . . . . ?
Arts of Yangon Thar at 12:37 PM3Hits!!
အရက်ဆိုင်ထဲမှာ လူနှစ်ယောက် စကားလက်ဆုံကျနေကြ၏။ တစ်ယောက်က...
``ခင်ဗျားမှာ မိသားစုပြဿနာရှိတယ်လို့ထင်သလား။ ကျုပ်မှာတော့ ရှိတယ်ဗျ။ ရှိပုံက ဟောဒီလို ဟောဒီလို။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကပေါ့ဗျာ။ မုဆိုးမငယ်ငယ်လေးတစ်ယောက်ကို ကျုပ်တွေ့တယ်။ သူ့မှာ အရွယ် မရောက်တရောက် သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိသဗျ။ အေးဗျာ... အဲဒီမုဆိုးမလေးကို ကျုပ်ယူလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျုပ်အဖေက ကျုပ်ရဲ့မယားပါသမီးငယ်ငယ်လေးကို ယူလိုက်ပါရော။ ဒီတော့ ကျုပ်မယားပါ သမီးလေးက ကျုပ်ရဲ့မိထွေး ဖြစ်သွားတာပေါ့။ နောက်ပြီး ကျုပ်အဖေဟာလည်း ကျုပ်ရဲ့ မယားပါသားဖြစ်သွားရော။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ကျုပ်မိန်းမဟာလည်း သူ့ယောက္ခမရဲ့ယောက္ခမဖြစ်သွားတာပေါ့။ အဲနောက်တော့ ကျုပ်မိန်းမရဲ့ သမီး တနည်းအားဖြင့် ကျုပ်ယောက္ခမက သားကလေး မွေးပါရောဗျို့။ ဒီမှာတင် ဒီသားဟာကျုပ်နဲ့ ဖအေတူ မအေကွဲ ညီအစ်ကို ဖြစ်လာပြန်တာပေါ့။ သူက ကျုပ်အဖေသားကိုး။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ဒီသားဟာ ကျုပ်မိန်းမသမီးရဲ့သားဆိုတော့ ကျုပ်မိန်းမရဲ့မြေးပေါ့။ ကျုပ်ကျတော့ မအေကွဲအဘိုးဖြစ်နေပြန်ရော။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်တို့လင်မယား ကလေးမရခင်မှာတော့ ဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူး။ အဲ... သိပ်မကြာဘူး။ ကျုပ်မိန်းကလဲ သားကလေးမွေးပါရော။ ကဲ ဒီတော့ ကျုပ်သားရဲ့အမေ တနည်းအားဖြင့် ကျုပ်ယောက္ခမပေါ့။ အဲ သူကအဘွားဖြစ်သွားပြန်ရော။ ဒီတော့ ကျုပ်အဖေဟာ ကျုပ်သားရဲ့ယောက်ဖဖြစ်ရပြန်တာပေါ့။ သူ့မအေတူ ဖအေကွဲအမေက ကျုပ်အဖေ့မိန်းမကိုးဗျ။ အဲ ကျုပ်ကျတော့ ကျုပ်မိထွေးရဲ့ခဲအိုဖြစ်နေပြန်တာပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်မိန်းမခမျာလည်း သူ့သမီးအရင်းခေါက်ခေါက် ကြီးရဲ့ အဒေါ်ဘ၀ ရောက်သွားရရှာတာပေါ့။ အဲ ကျုပ်သားက ကျုပ်အဖေရဲ့တူ ဖြစ်နေပြန်ရော။ ကျုပ်လည်း အဘိုးဖြစ်သွားရော။ ကဲ ခင်ဗျားမှာရော အဲဒီလို မိသားစုပြဿနာမျိုး ရှိတယ်လို့ ထင်သလားဗျ´´
ဖတ်မိတဲ့ ဟာသလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ရီရလား မရီရလားတော့မသိဘူး။ ခေါင်းကိုရှုပ်သွားတာပဲ။
Arts of Yangon Thar at 11:11 AM0Hits!!
ကျွန်တော့်အဘတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောရင်းက သူက ဟာသလေးတစ်ခုပြောတယ်။ တကယ်လား ဒဏ္ဍာရီလား ဆိုတာတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ဟာသလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်က တော်တော်ကြာပါပြီ။ မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး လက်ထက်ကပါ။ ပဉ္စမအကြိမ် သင်္ဃာယနာတင်တုန်းကပါ။ သင်္ဃာယနာတင်တယ်ဆိုတာက မြတ်စွာ ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ တရားတော်တွေကို မပျောက်မပျက်ရအောင်လို့ ရဟန္တာကြီးများဦးစီးပြီး၊ ပြန်လည်ရွတ်ဆိုတာကို ခေါ်တာပါ။ ပထမအကြိမ်ကနေ စတုထ္တအကြိမ်အထိ သင်္ဃာယနာတင်ခဲ့တုန်းထိသာ ရဟန္တာကြီးများပါဝင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ပဉ္စမနဲ့ ဆဋ္ဌမအကြိမ်တွေမှာတော့ မပါဝင်တော့ပါဘူး။ ပထမအကြိမ် သင်္ဃာယနာတင်တုန်းကတည်းက စည်းကမ်းချက်အနေနဲ့ကတော့ သင်္ဃာယနာတင်ပွဲတွင် ပါဝင်ခွင့်ရသူများမှာ ရဟန္တာဖြစ်ရပါမယ်။ စာတတ်ရပါမယ်။ ရဟန္တာဖြစ်ပြီး စာမတတ်ရင် ပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ရှင်အာနန္ဒာမထေရ်မြတ်ကြီးတောင် ရဟန္တာမဖြစ်သေးလို့ သင်္ဃာယနာတင်ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက် ရှင်မဟာကဿဖမထေရ်မြတ်ကြီးက ရှင်အာနန္ဒာကို ရဟန္တာဖြစ်အောင် ကြိုးစားလိုက်ပါဦးဆိုပြီး တစ်လတိတိဆိုင်းငံ့ပေးထားတာပါ။ သင်္ဃာယနာတင်ပွဲကိုလည်း ဘုရင်ကသာဦးစီးပြီး ကျင်းပရပါတယ်။ မင်းတုန်းမင်းကြီးလက်ထက်ရောက်တော့ သဒ္ဒါတရားထက်သန်ပြီး၊ သင်္ဃာယနာတင်ပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ တောင်ဖီလာဆရာတော်ကြီးအပါအ၀င် နာမည်ကြီးဆရာတော်ကြီးများပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ရဟန်းတော်ကြီးများက ပရိတ်တော်များရွတ်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာ မင်းတုန်းမင်းကြီးက ပရိတ်အိုးတွေကို လှမ်းလှမ်းကြည့်ပါတယ်။ အဲဒါကို တောင်ဖီလာဆရာတော်ကြီးမှလွဲပြီး ဘယ်သူမှ သတိမထားမိပါဘူး။ ဒါနဲ့ ဆရာတော်ကြီးက ဒကာတော်မင်းကြီးတော့ အကြောင်းတော့ရှိတော့မယ်ဆိုပြီး၊ မင်းတုန်းမင်းကြီးက ပရိတ်အိုးကို လှမ်းကြည့်လိုက်ရင် တောင်ဖီလာဆရာတော်ကြီးက ခင်းထားတဲ့ ကော်ဇောကြီးကို လှန်လှန်ကြည့်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပရိတ်ရွတ်ဖတ်တာတွေပြီးသွားတော့ မင်းတုန်းမင်းကြီးက ဆရာတော်ကိုလျှောက်တယ်။ အရှင်ဘုရား တပည့်တော်ကြားဖူးတာတော့ အရင်တုန်းက ရဟန်းတော်များ ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ရင် ရေများဆူပွက်လာတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်ဘုရား။ အခု အရှင်ဘုရားတို့ ရွတ်တာက ရေများ ဆူပွက်ခြင်းမရှိပါလားဘုရား လို့ လျှောက်တင်တယ်။ အဲဒီအခါမှာ တောင်ဖီလာဆရာတော်ကြီးက မင်းကြီး အာသောကမင်းကြီး သင်္ဃာယနာတင်တုန်းက ဘုန်းတန်ခိုးအရမ်းကြီးတော့ သင်္ဃာယနာတင်ပွဲကို လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ကောင်းကင်က ဂဠုန်တစ်သောင်း မြေပေါ်က နဂါးတစ်သောင်း ခြံရံလာတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ အခုမင်းတရားကြီးအလှည့်မှာ နဂါးများပေါ်လာမလားလို့ ကော်ဇောကို လှန်လှန်ကြည့်နေတာ တီကောင်တောင်မတွေ့ဘူး မင်းကြီးရဲ့။ ဒီတော့ကာ ပရိတ်ရေမဆူတဲ့ ဘုန်းကြီးနဲ့ တီကောင်တောင်မတွေ့တဲ့ ဘုရင် ဘဲစားဘဲချေပေါ့နော် လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်တဲ့။
ဟာသလေးကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ ဒါကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ အလုပ်တစ်ခုဟာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့သူပဲ လုပ်ရမှာ။ အဲလိုမှ မဟုတ်ရင် ပြီးပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတစ်ခုထဲနဲ့ လုပ်လို့မရဘူး။ အခုခေတ်မှာလဲ ငါလုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး လုပ်နေတဲ့သူတွေအများကြီး။ လုပ်ပြီးသွားရင် ခံလိုက်ရတာကများတယ်။ စည်းကမ်းလေးတွေကိုတော့ သိထားရင်ကောင်းတာပေါ့။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတစ်ခုထဲနဲ့ အလုပ်တစ်ခုက အဆင့်ကျသွားရင်မကောင်းဘူးပေါ့။ ကျွန်တော်လဲ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် တစ်ယောက်ပါပဲ။ ကျွန်တော်ပြောတာတွေကို ချက်ချင်းတော့ နားလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သေသေချာချာဖတ်ပြီး စဉ်စားကြည့်လိုက်ပေါ့။
Arts of Yangon Thar at 8:11 PM 1 Hits!!
M.B.B.S ဆိုတာ. . . .
တစ်ခါက နယ်မြို့လေးတစ်မြို့နားက ကျေးတောဆိုတဲ့ ရွာတစ်ရွာမှာ ဆေးဆရာတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ကျေးရွာတွေဆိုတော့ ဆရာဝန်မရှိကြဘူးလေ။ အနီးအနားကရွာတွေကလဲ သူ့ကိုပဲအားကိုးနေရတာပေါ့။ သူက တော်လဲတော်ပါတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံ ဖျားတာနာတာလောက်ကတော့ သူကနိုင်တယ်လေ။ သူရဲ့နာမည်က စိန်သောင်း။ သူ့ရွာအနီးအနားမှာတော့ ဆရာစိန်သောင်းဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေတာပေါ့။ သူက မြို့ကိုလဲ အရောက် အပေါက်ရှိတာရယ်၊ မြို့မှာလဲ ကျောင်းနေဖူးတာရယ်ကြောင့် နည်းနည်းတော့ မာန်ရှိတာပေါ့။ ဆေးဆရာကလဲ ဖြစ်နေပြန်တော့ ပိုပြီးဆိုးသွားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူက အကြောင်းမဲ့တော့ မာန်မတက်ပါဘူး။ အလုပ်ကိုလဲ စေတနာပါပါနဲ့လုပ်တယ်။ မြို့ကို ခဏခဏရောက်တော့ မြို့က ဆရာဝန်တွေက သူတို့ရဲ့ဆေးခန်းတွေမှာ ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေတက်ထားတာကို တွေ့တွေ့နေတာပေါ့။ အဲဒီတော့ သူကလဲ အားကျမခံ ရွာမှာလဲ သူရဲ့အိမ်မှာဆိုင်းဘုတ်တပ်မယ်ဆိုပြီး စိတ်ကူးတယ်။ ပြီးတော့ ပန်းချီရေးတဲ့သူဆီသွားပြီး ဆိုင်းဘုတ်အပ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ရလာပြီဆိုပါတော့......။ ရွာရောက်တော့ ချက်ချင်းပဲ အိမ်ရှေ့မှာ ဆိုင်းဘုတ်ကို တပ်လိုက်တယ်။ ရွာကလူတွေကတော့ အထူးအဆန်းဖြစ်နေတာပေါ့။ သူကတော့ ခပ်တည်တည်ပါပဲ။ သူ့ဆိုင်းဘုတ်မှာ ဘာတွေရေးထားလဲဆိုတော့. . . . . .
ဆိုပြီး ရေးထားတယ်။ သူ့ရွာမှာလဲ မြို့ရောက်ဖူးတဲသူတွေရှိတာပေါ့။ သူတို့က ဆိုင်းဘုတ်ကိုလဲမြင်ရော သူ့ကိုမေးတော့တာပေါ့။ မင်းကဘယ်တုန်းက ဒီဘွဲ့ကိုရတာလဲပေါ့။ သူက ဒီမှာရတာလို့ပြောတယ်။ တစ်ချို့လူတွေက မကျေနပ်ပဲ လိမ်တယ်ဆိုပြီး သူကြီးကိုတိုင်ပါလေရော။ သူကြီးကလဲ သူ့ကို ခေါ်တာပေါ့။ သူရောက်လာတော့ သူကြီးကမေးတယ်။ မင်းကဘာဖြစ်လို့ ဒီဆိုင်းဘုတ်ကိုတပ်တာလဲပေါ့။ သူက ကျွန်တော်ကလဲ ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်နေတော့ ဂုဏ်ရှိအောင်တပ်တာပါလို့ ဖြေတယ်။ ဒါနဲ့ သူကြီးက `ဒါဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ M.B.B.S ဆိုတာကြီးကို တပ်ရတာတုန်း၊ ဒါက မြို့ကဆရာဝန်တွေပဲ တပ်တာလေ၊ ပြီးတော့ မင်းက ဘွဲ့ရဲ့အနောက်မှာ (ကျေးတော)လို့လဲ ရေးထားသေးတယ်။ အဲဒါ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲဆိုတာ ပြောစမ်းပါဦး´လို့မေးတယ်။ ဒီတော့ သူက `သူကြီးကော M.B.B.S ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို သိလား´လို့ပြန်မေးတယ်။ သူကြီးက မသိလို့မင်းကိုမေးတာပေါ့ကွလို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဒီတော့ သူက `ကျွန်တော်က M.B.B.S ဆိုတာ ကို တပ်ချင်လို့တပ်တာမဟုတ်ဘူး။ သူ့မှာ အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်။ M ဆိုတာက မြန်မာ၊ B ဆိုတာက ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ နောက် B တစ်ခုက ဗိန်းတော၊ S ဆိုတာက ဆရာ၊ ဒီတော့ M.B.B.S ဆိုတာ `မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗိန်းတော ဆရာ´ လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ (ကျေးတော)ဆိုတာက ကျွန်တော်က ဒီရွာမှာနေတာမို့လို့ ရေးထားတာ။ ကဲ.. သူကြီး ဘာများ မေးချင်သေးတုန်း။ လို့ ပြန်မေးလိုက်တယ်။ ဒီအခါမှာတော့ သူကြီးနဲ့ ရွာသားတွေဟာ ဘာပြောလို့ ပြောရမှန်းကို မသိဖြစ်ပြီး၊ ပါးစပ်အဟောင်းသားလေးတွေနဲ့ . . . . . . .
ကဲ စာဖတ်တဲ့သူရော M.B.B.S ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေးကို သိသွားပြီပေါ့နော်. . . . . . . . နောက်ဆိုရင် ကိုယ်နေမကောင်းဖြစ်လို့ ဆေးခန်းသွားရင် ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေကို တွေ့တိုင်း ဒီပုံပြင်လေးကို သတိရလိုက်နော်။
Arts of Yangon Thar at 8:56 PM7Hits!!
မရှိသောနေ့တစ်နေ့ (သို့) မနက်ဖြန်
တစ်ခါက လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့။ သူဟာ အင်မတန်ပျင်းတယ်။ ပြောမရ၊ ဆိုမရ၊ ဆုံးမလို့မရနဲ့။ သူ့ဖခင်နဲ့ မိခင်က ရွာဦးက ဆရာတော်ကျောင်းကိုပို့ပြီး ကျောင်းနေစေတယ်။ ထိုသူငယ်ဟာ ပျင်းပေမယ့် ချမ်းတော့ချမ်းသာချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာတော်က ချော့လိုက်ခြောက်လိုက်နဲ့ သင်ကြားပေးတယ်။
`မင်းစာတွေတတ်ရင် ချမ်းသာမှာကွ´လို့ပြောပြီး၊ သင်ပေးရတာပေါ့။ သူငယ်ဟာ ကြိုးစားရင်း ကြိုးစားရင်း လူတော်လေးဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် မချမ်းသာသေးဘူး။ ဒါကြောင့် ဆရာတော်ကို လျှောက်တယ်။
`အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော် ဘာကြောင့်ခုထိ မချမ်းသာသေးတာလဲ´
`နံပါတ်တစ်ကတော့ မင်း ပညာမတတ်သေးလို့၊ နံပါတ်နှစ်ကတော့ မင်းဟာချမ်းသာဖို့ အချိန်မရောက်သေးလို့ ဒီနှစ်ချက်ကြောင့်ပဲ´
`ဒါဆို တပည့်တော် ဘယ်တော့ ချမ်းသာမလဲဆိုတာ အရှင်ဘုရားပြောနိုင်လား´
`ဒါဆို တပည့်တော်ကို ပြောပြပါဘုရား´
`တပည့်တော် မနက်ဖြန်ဆို ချမ်းသာမယ်ဟုတ်လား´
သူငယ်ဟာ ၀မ်းသာလို့ တစ်ညလုံး အိပ်လို့မရဘူး။ နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ သူ့ကိုယ်သူကြည့်တယ်။ အရင်အတိုင်းပဲ။ ချမ်းလဲမချမ်း သာလာဘူး။ ဒါနဲ့ ဆရာတော်ကိုလျှောက်တယ်။
`အရှင်ဘုရား တပည့်တော် ဒီနေ့ ချမ်းလဲမချမ်းသာသေးဘူးဘုရား´
`ဒါဆို ဒီနေ့ တပည့်တော် မချမ်းသာသေးဘူးလေ´
`ဒါအမှန်ပေါ့၊ ဒီနေ့ ဘယ်ချမ်းသာမလဲ၊ မနက်ဖြန်မှ ချမ်းသာမှာ´
`ဒီနေ့ဟာ မနက်ဖြန်လေ၊ ဟာ ရှုပ်ကုန်ပြီ၊ တပည့်တော် နားမလည်ဘူး´
`ငါသိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငါပြောတာပေါ့။ မင်း ပညာတတ်ဖို့လိုသေးတယ်လို့။ မင်းတို့က မနက်ဖြန်ကို မျှော်နေကြတယ်။ တကယ်တမ်း မနက်ဖြန်က ရောက်လာရော၊ မနက်ဖြန်ဟာ ဒီနေ့ဖြစ်သွားတယ်။ မင်းနဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ တွေ့ကြုံခံစားတာဟာ ဒီနေ့ပဲ။ မနက်ဖြန်မဟုတ်ဘူး။ ဒီနေ့ . . . . . .´
အတန်ကြာစဉ်းစားပြီးနောက် သူငယ်ဟာ `တပည့်တော် သဘောပေါက်ပါပြီဘုရား´လို့ တင်လျှောက်လိုက်သတဲ့။
ပုံပြင်ထဲမှာတော့ သူငယ် ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာ မပါလာဘူး။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ဟာ မနက်ဖြန်ကို မျှော်လင့်နေတာ အသေအချာ ပဲ။ ခုလုပ်လို့ပြီးနိုင်တာတွေကို မနက်ဖြန် ရွှေ့နေကြတယ်။ မနက်ဖြန်မှဖြစ်မယ့် ကိစ္စတွေကို ဒီနေ့တွေးပူနေကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပစ္စုပ္ပန်မှာ မနေကြဘူး။ အတိတ်ကိုသတိရတယ်။ အနာဂတ်ကို မျှော်ကြတယ်။ ဒေးကာနက်ဂျီရဲ့ `သောကကင်းဝေး နေနိုင်ရေး´စာအုပ်ထဲ မှာ ဆာဝီလျံအော့စလာအကြောင်း ရေးထားတာကို မှတ်သားရဖူးတယ်။ သူ့အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့ စာအုပ်က နှစ်တွဲတောင်ရှိပြီး အတော်လေးထူတယ်။ သူငယ်စဉ်က ဆေးကျောင်းတက်နေစဉ် ပူပင်သောကရောက်နေတယ်။ ဘာမှမလုပ်နိုင်၊ မကိုင်နိုင်၊ မစားနိုင်၊ မသောက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်တဲ့။ ဒီအခါ စာတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်မိတယ်။ `ကျုပ်တို့အလုပ်က အဝေးကြီး မထင်ရှားရှိနေတာကို ကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ အနီးကပ် လက်ထဲမှာရှိတာကို လေ့လာဖို့ပဲ´တဲ့။ ဒီစာဖတ်ပြီးနောက် သူဟာ တစ်ရက်စာအတွက်သာ စာဖတ်တယ်။ တစ်နေ့တာအတွက် သာ ရပ်တည်တယ်။ နောက်နေ့အတွက် ပူပန်မနေတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ သူကျောင်းမှာ အမှတ်ကောင်းကောင်းရခဲ့တယ်။ ဂျွန်ဟော့ကင် ဆေးကျောင်းမှာ ပါမောက္ခဖြစ်လာတယ်။ ဘုရင်မကချီးမြှင့်တဲ့ သူရဲကောင်းဘွဲ့ကိုရတယ်။ တက္ကသိုလ်ကြီးလေးခုကိုလှည့်ပြီး၊ ပါမောက္ခလုပ်ရတယ်။ Brain if Special Quality ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုလည်းရေးခဲ့တယ်။ တစ်ရက်မှာ သူ ယေးလ်တက္ကသိုလ်မှာ ဟောပြောခဲ့တယ်။ သူကျောင်းသားတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာပါပဲ။ `ပါမောက္ခကြီးဖြစ်လို့ မင်းတို့က ငါ့မှာ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ ဦးနှောက်ရှိတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့၊ ငါဟာ သာမန်လူတစ်ယောက်ပါပဲ။ သာမန်ဦးနှောက်ပဲရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါက တစ်နေ့စာအတွက် တစ်နေ့သာစဉ်းစားတယ်။ သင်္ဘောတွေမှာရှိတဲ့ ရေလုံခန်းတွေလိုပဲ။ တစ်ခန်းရေ၀င်ရုံနဲ့ သင်္ဘောမမြုပ်နိုင်ဘူး။ အနာဂတ်ဆိုတာ ယနေ့ပါပဲ။ မနက်ဖြန်ဆိုတာ မရှိဘူး. . .´တဲ့။ ဆာအော့စလာက မနက်ဖြန်အတွက် မပြင်ဆင်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ မနက်ဖြန်အတွက် ပူပန်မှု ကင်းဖို့ပြောတာပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့လည်း ပစ္စုပ္ပန်ကို တည့်တည့်ရှုရမယ်ဆိုတာကို သိထားပါတယ်။ ယနေ့ကို တည့်တည့်ရှုရ တယ်။ ဒါပေမယ့် အိုနာသေဘေးအတွက် ပြင်ဆင်ထားဖို့ နားလည်ထားရတယ်။ ဘ၀မှာ ပူပန်မှုကင်းစွာ ခရီးဆက်ရမှာဖြစ်တယ်။ အဲသလို တည့်တည့်ရှုတဲ့ ခရီးမှာ အပူအပင်ကင်းတယ်။ အောင်မြင်ကြပါတယ်။ ။ (ဒေါက်တာခင်မောင်ညို)
မှတ်ချက်။ ။ ကိုယ်တိုင်ရေးစာမူမဟုတ်ပါဘူး၊ copy ကူးပြီး ပြန်ရေးတာပါ။ ရန်ကုန်သားကို အထင်ကြီးနေမှာဆိုးလို့ပါ။ ဖတ်မိတာ တွေထဲက ကောင်းတာလေးတွေကို မကြာမကြာ တင်ပေးပါ့မယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က သိပ်မရေးနိုင်သေးဘူးလေ။ မရေးနိုင်သေးလို့ဆိုပြီး လဲ တွေးပြီးပူမနေတော့ပါဘူး။ ရေးနိုင်မှပဲ ရေးတော့မယ်။ ဒါနဲ့စကားမစပ် ရန်ကုန်၊ မြေနီကုန်းက Dagon Centre မှာ ၄-၅-၀၇ နေ့က ရွာလိုက်တဲ့မိုးကြောင့် မြေအောက်ကားပါကင်ထဲကိုရေ၀င်ပြီး ကားတွေရေမြုပ်သွားလို့ ၅-၅-၀၇ နေ့မှာ Centre ကိုပိတ်ပြီး၊ မီးသတ်ကား တွေနဲ့ ရေတွေစုပ်ထုတ်နေရပါကြောင်း သတင်းကြားသိရပါတယ်။ သမာအာဇီဝကျကျနဲ့ စီးပွားရှာပြီး ၀ယ်ထားတဲ့ကားတွေဆိုရင်တော့ ကားပိုင်ရှင်တွေကိုတော့ သနားပါတယ်။ မတရားနည်းလမ်းတွေနဲ့ ရထားတာတွေဆိုရင်တော့ ၀မ်းတောင်သာသေးတယ်ဗျိုး . . . . . . . ။
Arts of Yangon Thar at 11:17 PM 1 Hits!!